Madaxa dhululubada, Qaadashada Qaybaha, Qaybaha Aluminium ee Dhinta - Yongyu
Madaxa AJM Aluminium madaxa 03G103351C / 03810335 ...
BYT madaxa silsiladda Aluminium 06H103064A
D4CB-VGT Aluminium madaxa silsiladda 22100-4A210 / 22 ...
FICE3481M / E / N Aluminium madaxa silsiladda 0200KC
F1AE Aluminium madaxa silsiladda 504049268
1005B452 Aluminium madaxa silsiladda 4D56U / 4D56HP
4D56 Aluminium madaxa silsiladda MD109736
WEWLAT Aluminium madaxa silsiladda WE01-10-100K
DW8DW8T Aluminium madaxa silsiladda 02.00.CP
F8Q600 madaxa silsiladda Aluminium 7701478460
ZD30 Aluminium madaxa silsiladda 7701058028
WL madaxa aluminium Aluminium WL1110100E
Taizhou Yongyu Warshadaha CO., LTD. waxaa la aasaasay 1994. Shirkaddu waxay u heellan tahay waxsoosaarka qaybaha aluminium ee aluminiumka in ka badan 20 sano. Shirkadda hadda waxay leedahay aag dhisme oo gaaraya 43,000 oo mitir murabac ah waxaana u shaqeeya in ka badan 300 oo qof. Waxay leedahay koox maarayn tayo sare leh iyo in kabadan 80 shaqaale xirfad iyo farsamo leh. Shirkaddu waa shirkad xirfadle ah alaab-qeybiyeyaasha OE oo diiradda saareysa tuurista cuf-jiidka,shubka cadaadiska hooseeya iyo dhimista ridaha. Horumarka, Dajinta iyo soo saarida awooda shirkadu waxay ku haysaa hogaaminta isla warshadaha. Shirkaddu waxay soo dejisaa tiro badan oo mashiinnada saxda ah iyo qalabka baaritaanka ah, si loo hubiyo tayada wax soo saarka iyo adeegga si loo gaaro shuruudaha tayada OE. Sidaa darteed waxay u abuureysaa nafteeda suuq joogto ah oo tartan ah, badeecadana waxaa laga siiyay adduunka oo dhan kaas oo ku guuleystay macaamilka si ballaaran.
noocyada lagu dabaqi karo
Kooxdayada iibka waxay kaqeyb qaadatay Automechianika ...
Kooxdayada iibka waxay kaqeybgaleen Bandhigga Automechianika Shanghai Show bishii Dec.3th.2019.
Bishii Juun 9th.2017, xoghayaha Yuhuan munic ...
Bishii Juun 9th.2017, xoghayaha xisbiga dawlada hoose ee Yuhuan iyo kooxdiisu waxay yimaadeen YONGYU si ay u sameeyaan cilmi baaris. Wuxuu si aad ah uga hadlay guusha ay gaartay YONGYU sanadihii la soo dhaafay, wuxuuna dhiiri geliyay qof walba oo kursiga ku fadhiya ee ka shaqeeya gaariga iyo Mootada ...
012020 / Maajo
Iibinta gawaarida suuqa Mareykanka
Marka loo eego falanqaynta goodcarbadcar, iibinta baabuurta ee suuqa Mareykanka bishii Maajo 1st 2020 ayaa lumisay kudhowaad 20% marka loo eego isla xilli ciyaareedkii sanadkii hore. Fiiri miiska xogta, iibka Hyundai wuxuu qiimeynayay qiyaastii 38% marka loo eego sanadki ugu dambeeyay isla bishaas. Mazda iib wa ...